MIADY NY AMPANJAKABE DJAOFENO RICHARD SY RASOAMODY : Miezaka mandamina ny fanjakana
Voatery nidina tany amin’ny fokontany Betsioka, kaominina Ankijabe, distrikan’Ambato ny prefen’i Mahajanga Ravelomahay Lahiniaina sy ny sefo distrikan’Ambato Boeny ary ny Ben’ny tanànan’Ankijabe niezaka nandamina ny olana misy eo amin’ny ampanjakaben’i Boeny teo aloha Djaofeno Richard sy ny ampanjaka amin’izao Soamody. 13 septembre 2017
Voalaza mantsy fa mihizingizina hiverina amin’ny toerany ny ampanjakabe teo aloha Djaofeno Richard ary tsy manaiky izany ny ekipan’i Soamody sy Rasamimanana. Atahorana hifamono araka izany ny roa tonta ka tsy maintsy nandray andraikitra ny fanjakana na dia tsy miditra amin’ny fahefan’ny ampanjaka aza fa andraikiny tanteraka kosa ny filaminam-bahoaka, araka ny nambaran’ny Ben’ny tanànan’Ankijabe izay efa nanao dingana maromaro hamahana ny olana.
Nisy ny fampihaonana ny roa tonta nitadiavana marimaritra iraisana izay tsy mora, hoy hatrany izy nefa efa misy sori-bahaolana. Misy ny fepetra horaisin’ny fanjakana tsy ho ela izay hampahafantarina ny roa tonta voakasiky ny olana. Nanambara kosa ny fahatelo fa angovavin’i ampanjaka Djaofeno ny ampanjaka Soamody, izany hoe babany ka rariny raha izy no manjaka. Izy rahateo sady andriambavilanitra no mahay mitantana olona.
Nambaran’ity tompon’andraikitra ao amin’ny doany Miarinarivo ity hatrany fa nanao salanitra anatin’ny olona manompo an’Ambabolahy, nametraka varavaran’ny zombavinda I Djaofeno Richard nanday fokonolona maro, nihoalahoala teo Anjarafa, ka ampahafantarina ireo mpanompo rehetra izany. Didy efa napetraky ny tompon-tanàna Ambabolahy hoy hatrany izy ny hoe ataovy ny mety apetraho ny tsy mety. Tsy mety milamina ny fitondran’ny fahefam-panjakana ara-drazana eto Mahajanga. Ny ao amin’ny doany Miarinarivo ka mipaka hatrany amin’ny foibe any Betsioky. Ambato Boeny mantsy no mitahiry ireo fananan’ny fanjakan-drazana Sakalava ao amin’ny doany Miarinarivo ao. Any no misy ny tanimbary sy ny omby, raha ao Mahajanga faharoa kosa no hakana ny fandrama.
Toe-karena iray mihitsy no mihodina amin’io fahefam-panjaka sy fivavahan-
drazana ka mahatonga disadisa eo amin’ireo mpitarika io. Taorian’ny nahalasanan’ny ampanjaka Dezy dia tsy nilamina intsony ny ao amin’ny doany Miarinarivo ao, ankoatra ny olana misy eo amin’izy ireo sy ny ao amin’ny doany avaratra. Na izany aza dia misy hatrany ny fanompoa isan-taona.
Tsindrian-daona kosa ireo mpanaraka ny fivavahan-drazana hahafantatra ny fepetra raisin’ny fanjakana mikasika ity raharaha ity hisorohana ny fifamonoana sy ny hitandroana ny filaminam-bahoaka.